R/wasaare Cumar Cabdirashiid oo Xafiiskiisa kula kulmay qaar kamid ah Culimada ugu caansan Soomaaliya - Wargeyska Faafiye
R/wasaare Cumar Cabdirashiid oo Xafiiskiisa kula kulmay qaar kamid ah Culimada ugu caansan Soomaaliya
Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Federalka Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, ayaa maanta kulan kula qaatay xafiiskiisa Ha’yada Culimada Soomaaliyeed, isagoo ku dhiirrigeliyey hoggaamiyayaasha diinta in ay gacan ka gaysta sidii dalka looga saari lahaa marxalada uu ku jiro.
Kulanka Ra’iisal Wasaaruhu la qaatay culimada ayaa la isku weydaarsadeen sida ugu habboon ee culimada diintu iyo dowladdu iskaga kaashan karaan wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka nabad diidka, wuxuuna sidoo kale la tashi kala yeeshay Xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisi doono.
“Waxaan la soconaa in culimada diintu ay yihiin kuwo meel sare kaga jir bulshada, loogana fadhiyo iney dadaalkooda ku biiriyaan halgankan dalka lagaga xoreynayo kooxaha nabad-diidka ah. Waana in shacab iyo dowladba u midownaa dagaalka, loona xasilin lahaa goobaha laga xoreeyey, loogana hortagi lahaa fikirka xagjirnimada ah. Waana muhiim ah in culimadu ay qaataan kaalintooda hoggaamineed.” ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Sharma’arke.
“Kooxda Al-shabaab waa koox baadi ah, kamana turjumayaan u jeedooyinka iyo qiyamka sarreeya ee diinta Islaamka. Xukuumadda aan soo dhisi doono waxa ay balanqaadaysaa in ay kaalin mug leh siin doonto culimada si loo cirib tiro fikirka qalafsan ee kooxda Al-shabab. Kaalinta culimadu waxa ay noqoneysaa mid wax ku-ool, laf-dhabarna u ah horumarka dalka, waxaana kaalin mug leh laga siin doonaa talada dalka iyo go’aamada la gaarayo.”
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsR/wasaaraha oo la ansixiyayBambaano Lagu tuuray Kaniisad Kutaala Xaafada islii Nairobi.Axmed Madoobe iyo Nicholas Kay oo ku kulmay Kismaayo.Guilty: Jury convicts Man for the Murder of Somali Man .Gabar 14 jir ah oo loo toogtay dhiiri galinta in ay dumarku wax bartaan.